CHI-SPANIEL IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Chi-Spaniel Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Chihuahua / Cocker Spaniel Akavhenganiswa Mhando Dzembwa
'Uyu mwana wangu Daisy Mae ave nemwedzi mitanhatu ekuberekwa. Takamuwana kubva kuMerry Angels kununura. Kurema kwake kuri pasi pegumi gumi. uye vakabata. Isu hatisi kutarisira kuti awane chero kukura. Iye imbwa huru. Iyo imbwa ine hushamwari zvakanyanya. Haazivi mutorwa uye anoda vana. Shamwari yake yepamwoyo murume wangu Yorkie. Vanotamba kwemaawa nemaawa. Anodzidza zvinhu nekukasira. Yakanyanya nyore kupoto chitima . '
Iyo Chi-Spaniel haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Chihuahua uye iyo Cocker Spaniel . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwerudzi rwakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika 50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
Ripley iyo Cocker Spaniel / Chihuahua musanganiswa pazera remakore maviri 'Ripley ndeye 14 lb yangu. Cocker Spaniel / Chihuahua musanganiswa unofanana ne chidiki Brittany Spaniel (kana chinhu chakadai chaivapo). Iye ane rupo minhenga pamakumbo ake, nzeve, uye muswe uye inodzora mwenje. Ane hunhu hune rudo, hunotapira, uye hunozviisa pasi. Iye akanyarara uye haaparadze, uye anoda katsi . Muchidimbu, ini ndingadai ndisina kukumbira imbwa yekutanga iri nani. Akanga akakodzera kumirira! '
Ripley iyo Cocker Spaniel / Chihuahua sanganisa sembwanana pamwedzi miviri yekuzvarwa yakapfeka juzi repinki
'Uyu ndiZoey sembwanana. Iye Chihuahua (murume) uye Cocker Spaniel (mukadzi) musanganiswa. Akangwara uye anotamba. Iye anotora uye anobata matoyi, anonzwisisa akati wandei mazwi. Handizive kukura kwaachaita. Ishamwari yakanaka. '
'Uyu ndiMiss Ruby Mwedzi aka Ruby. Iye ane 12-vhiki-yekare Chihuahua uye nhema Cocker Spaniel sanganisa. Amai vake ndiChihuahua. Ini ndinogara kuMichigan uye akawanikwa ini ndiri parwendo rwemugwagwa wezororo. Iye akazvarwa paLookout Mt., TN, chaipo pamusoro peRuby Falls. Yakanga iri mwedzi izere pandakamuwana, ndomawaniro aakaita zita rake. Mwana murombo aive akadaro nhata dzakazara kuti nzeve dzake dzakabuda ropa pandakamushambidza. Aive nemabhati maviri munzvimbo dzekuzorora dzekugezesa dzakawanda dzadzo. Iye anofara zvikuru zvino uye akaunza mufaro mukuru kumhuri yangu. Iye akanaka, ane rudo, anotamba, akangwara, akangonaka-ane hunhu uye anoda kuziva imbwanana, anoda kuve kunze, uye anokwanisa kuenderera 2-mamaira kukwira , Anorema anenge 3.25 lbs. uye akanaka kwazvo! Ane hama yandisina kutora, anga akaenzana nekukura kwake uye aive mutema uye akatarisisa Cocker kupfuura Chihuahua. '
Daisy Mae weChi-Spaniel pamwedzi mitanhatu
Daisy Mae weChi-Spaniel sediki mwana wembwanana akapfeka hembe.
Sangana naPenny Muridzo. Akapfupiswa senge Chihuahua, kunyangwe kumeso kwake kwakati fananei seCocker. (Paaive mudiki airatidzika zvakanyanya kunge Chihuahua kumeso.) Iye ane nzeve dzeCocker iyo hafu inoputika kana achida kuziva kana kuteerera. Anorema makumi maviri. ikozvino. Kusvikira araswa chipfuva uye chiuno chakaita kunge a Greyhound kana Whippet . Kubva ipapo, akazadza kuburikidza nehudyu. Zvakare, iye anodurura YAKAWANDA. Iye anodzidza hunyengeri zviri nyore uye ne vane simba, varidzi vanozvishingisa inoteerera. Nekudaro, ini ndinowedzera kukurudzira kudyara muhunyanzvi hwekutanga hwehukama sembwanana. '
'Penny Whistle iyo Chi-Spaniel inoda kumhanya nekutora. Anogona kukwira madaro marefu uye haamboita kunge anopera simba kunze. Isu kazhinji famba .5 kusvika 1 mamaira pazuva uye imwe yakareba 5-mi. + famba pavhiki. '
Penny Ridza muridzo Chi-Spaniel
Chinyorwa cheChihuahua Hybrid Imbwa
Rhodesian ridgeback uye lab musanganiswa
toy australia mufudzi mutema tri
anoita sei munhu anodheerera anotaridzika
mini Australia mufudzi mutema uye chena
miniature pinscher yakasanganiswa ne shih tzu
shih tzu uye imbwa yekusanganisa yorkie